Sonos Bugharịa: Sonos nke mbụ na-apụ n'okirikiri batrị nwere ikike | Akụkọ akụrụngwa
Sonos Bugharịa: Sonos okwu izizi nke ụwa n'èzí na-ekwu okwu Sonos
Sonos na ewebata otutu ihe ohuru na onwa ndia. Dị ahụ jiri ohere nke ọnụnọ ya na IFA 2019 wee hapụ anyị ngwaahịa na-atọ ụtọ ugbu a. Ha webatara Sonos Move, nke bụ ọkà okwu maara ihe, nke nwere ụda dị mma, mana na anyị nwekwara ike iji ebe niile. Mgbanwe na-adọrọ mmasị maka ụlọ ọrụ, nke na-aga n'ihu na-eto eto n'ụzọ a n'ahịa.
Ọ bụ ọkà okwu ga-ada ụda oge niile, zuru oke maka ojiji n’èzí ma ọ bụ na njem. Sonos Move na-anọchite ọhụụ ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ahụ, nke na-ahapụ akụkụ ụlọ n'ụzọ dị otú a iji hapụ anyị ezigbo ọkà okwu iji jiri n'èzí na-eme ihe.
Companylọ ọrụ ahụ na-eju anya na ngwaahịa a, nke doro anya na ọ ga-amasị ọtụtụ. Sonos Move nọ ebe a ka ọ gbanwee usoro nke ndị ọkà okwu a na-ebugharị na ụda ọgụgụ isi na nke nwere ike imeghari, ihe ijuanya dị omimi na nnukwu ụda profaịlụ. A kwadebere ya maka ige ntị n'ime ụlọ yana ụda dị ike na-agagharị, ọ bụ ọkà okwu nwere ọgụgụ isi abụọ. Ebe ọ bụ na anyị Kpọọ egwu site na Bluetooth, nke mbụ nke ika n'echiche a.
Tụkwasị na nke a, iji hụ na ọ nwere ahụmahụ kachasị mma na ya, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na etinyere teknụzụ na-arụ ọrụ na Trueplay. iwebata akpaka Trueplay. Emere nke a ka ọkà okwu wee dabaa ụda na gburugburu ya. Yabụ dabere na oge ahụ, a ga-agbanwe ya iji nye anyị ahụmịhe kachasị mma. Anyị agaghị eme ihe ọ bụla.
Sonos Move nwere oval na oji. Companylọ ọrụ a etinyela igwe okwu a site na ụdị ule ọ bụla iji mee ya ka ọ bụrụ nkwuputa ụda n'èzí. Nke a bụ ihe gosipụtara na imepụta ya, nke na-esiteghị na nkọwa. Ma n'ihi nkwụsi ike ya. Ihe nlereanya a nwere iguzogide ọdịda, ịfụ ọkụ, mmiri ozuzo, iru mmiri, uzuzu, unyi, ụzarị ọkụ UVA na oke okpomọkụ, na mgbakwunye gụnyere gụnyere nchekwa IP56.
Batrị ahụ bụ ike ọzọ nke ihe nlere a, emebere iji na-aga ụbọchị niile. Dị ka ụlọ ọrụ na-agwa anyị, batrị nke a Sonos Bugharịa Ọ ga-enye anyị ihe ruru awa 10 nke na-aga n'ihu na-akpaghị aka playback na otu ụgwọ. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na anyị ejiri ya n'ụlọ, anyị ga-enwe ike itinye ma wepu ọkà okwu site na ntọala ntinye nke ime ụlọ. Ya mere ọ ga - ekwe omume ijikọ ya oge niile, na - achọpụta na ọ dị njikere iji ya mgbe niile. Leepra ihi ụra, nke na-arụ ọrụ na akpaghị aka mgbe ejighị ya ma ọ bụ mgbe ịpịrị bọtịnụ ike, na-echekwa batrị ruo ụbọchị ise.
Ihe nkowa ozo nke ihe omuma a bu na obu oge mbu ndi ulo oru rapuru anyi ndi enyemaka olu abuo. Dị ka ngwaahịa Sonos ndị ọzọ nwere olu, abịa na Google Assistant na Amazon Alexa wuru. Yabụ, mgbe ijikọ ya na WiFi, ị ga - enwe ike ịrụ ụdị ọrụ ọ bụla, dịka ịkpọ egwu, ịlele ozi ọma, ijikwa ngwaọrụ ụlọ dị mma, ịjụ ajụjụ na ọtụtụ ihe na-enweghị iji aka gị. Dị ka akụkụ nke ikpo okwu Sonos, nke na-ebute nhọrọ ụzọ, ọ na-ejikọ ihe karịrị ọrụ nkwanye 100 (egwu, akwụkwọ ọdịyo, pọdkastị na ọtụtụ ndị ọzọ) ma jiri ngwa Sonos, AirPlay 2 ma ọ bụ site na ngwa ọrụ egwu na-ejikwa ha.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta Sonos Move a, ị gaghị echere ogologo oge. Enwere ndokwa maka ya taa, yabụ na ị ga - emerịrị onye na - ekwu okwu akara a n'ụzọ dị mfe. Enwere ike ime ya na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ, dịka ha kwenyelarị.
Mbido ya zuru ụwa ọnụ ga-ewere ọnọdụ n'ọnwa a. N’abalị iri abụọ na anọ nke ọnwa Septemba, anyị ga-azụtacha ya n’ụwa niile. A malitere ya na ọnụahịa nke euro 399 iji chekwaa. Gịnị ka i chere nke a ọkà okwu si ika?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Sonos Bugharịa: Sonos okwu izizi nke ụwa n'èzí na-ekwu okwu Sonos
eFootball PES 2020 FC Barcelona Edition nwere ụbọchị mmalite